▷ VIP प्लेट LEGO 5007016 1950's Retro Tin को क्लोज-अप - HOTH BRICKS ▷ VIP प्लेट LEGO 5007016 1950's Retro Tin को क्लोज-अप - HOTH BRICKS
गिलियड : Sympathique cette brickhead...
Cyrillebqt : यो दायरा उत्कृष्ट छ र यो सेट एक निरन्तरता हो ...
क्रउटन : नेग्रेस्को! केहि भन्नु छैन, नियमित रूपमा म आफैलाई भन्छु कि यो आवश्यक हुनेछ ...
Cyrillebqt : यो अझै5€ क्लोन trooper को लागी छ! ...
ग्रोकानार : धेरै धेरै राम्रो। शैली र वास्तुकला शानदार छ ...
Cyrillebqt : म BrickHeadz को प्रशंसक होइन तर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि यो ...
ग्रोकानार :3सैनिकहरू किफायती मूल्यमा * - * ...
रेयन : Bof, मलाई brickheadz मा जनावरहरू बढी विश्वसनीय लाग्छ।
ग्रोकानार : वास्तवमै ब्रिक हेड्ज फ्यान होइन। तर मलाई अशोक मन पर्छ...
एरिक LAVEUVE : उत्कृष्ट सेट। मोड्युलरहरू साँच्चै धेरै सफल छन् ...